भिडियो – Page 562 – Etajakhabar
ईटहरी- यो बर्षको सुपरहिट फिल्म “छक्का पन्जा-२” यतिखेर प्रदर्शनकै क्रममा छ । हल रिलिज भएको चौथो हप्ता सम्म आईपुग्दा पनि फिल्मको ब्यापारमा राम्रै प्रगती भैरहेको छ । छक्का पन्जाले जस्तै छक्का पन्जा २ ले पनि केही रेकर्ड ब्रेक गर्न सफल भयो । फिल्म सुपरहिट भैइरहदा फिल्मका निर्देशक दीपाश्री निरौला र नायिका बर्षा राउत पुर्वका हलहरुमा दर्शक संगै फिल्म हेर्न आईपुगिन । यसै सिलसिलामा बर्षा र दीपा संग केही ...
ट्रम्प र देउवाको देउसी जुहारी धुर्मुस र मनोजको पेट मिची मिची हसाउने कमेडी भिडियो
काठमाडौँ- विगत लामो समयदेखि हरेक बर्ष सिस्नुपानी नेपालले गर्दै आएको देउसी भैलो कार्यक्रमले यसपाली पनि निरन्तरता पाएको छ । राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको सो कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारहरुले थुप्रै खाले प्रस्तुति देखाए तर तिनै भीडमा सबैको ध्यान सबैभन्दा बढी अमेरिका राष्ट्रपति बनेका मनोज गजुरेल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बनेका सिताराम कट्टेल धूर्मुसको प्रस्तुतिमा पर्यो । देशकै शिर्ष ने...
श्रीमान विदेशीँदा श्रीमतीलाई हुने पीडा हेर्नुहोस् भिडियोमा
काठमाण्डौ। डी.आर. 'अटु'को शब्द/संगीत, सुनिता थेगिमको स्वर रहेको गीत 'मेरो प्यारा'को भिडियो रिलीज भएको छ । रमेश संग्रौलाको निर्देशनमा बनेको भिडियोमा 'मेरीबास्सै' तथा 'खासखुस' हाँस्य टेलीश्रृंखलाबाट 'बट्टारे कान्छा' नामले चर्चित सन्देश लामिछाने र मोडल सारिका केसीको अभिनय रहेको छ । गीतले श्रीमान विदेशीँदा श्रीमतीलाई हुने पीडा व्यक्त गरेको छ । गीतमा तिहार लगायत चाडबाडको माहौल समेत रहेको छ । दिक्ते...
काठमाडौँ । कालजयी गीत प्रतिक्षा गर मेरी मायालुको कभर संग लिएर आएका छन् गायक अनिश पाण्डेले । पुराना स्रटाको सम्मानका लागी गायक दिपक खरेलको स्वरमा सजिएको गीत निकै नै मर्मस्पशी भएको र यस गीतलाई बाल्यकालदेखि नै सुन्दै आएकाले अहिले आएर कभर संगका रुपमा फेरी ब्युँत्याएको गायक पाण्डेले बताए । पुरानो गीतको वरिजिनल क्वालिटी नभएको र भिडियो समेत उत्कृष्ट नभएकाले परिमार्जित शैलिमा पुन ब्यूँत्याउने कोशिस गर...
अभिनेत्री निशा अधिकारीले निर्माण गरेको चलचित्र ‘झ्यानाकुटि’मा बेनिशा र सौगातको जोडी जमेपछि (भिडियो)
काठमाडौँ । चलचित्र 'झ्यानाकुटि'को ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि अभिनेता सौगात मल्ल र बेनिशा हमालको मुख्य भुमिका रहेको सो चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। आलु प्रोडक्सनको पहिलो प्रस्तुति रहेको चलचित्र 'झ्यानाकुटि'मा अभिनेता सौगात मल्ल र बेनिशा हमालको मुख्य भुमिका रहेकोछ । अभिनेत्री निशा अधिकारीको निर्माण र सिमोन सुनुवारको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्...
नायक सलोन र आमेसको देखियो रुम नं १०८ काण्ड (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । नायकद्धय सलोन वस्नेत र आमेश भण्डारीले अभिनय गरेको भिडियो 'रुम नं १०८' सार्वजनिक भएको छ । भिडियो कलाकारद्धयलाई डिजे गिरिस खतिवडाले साथ दिएका छन । पर्फेक्ट प्लान यू-ट्युब च्यानलबाट जानिक गरिएको छ । जसमा आमेश,सलोनको अलवा करिष्मा केसी,पुनम रायमाझी,उर्मिला श्रेष्ठ,रक्षक कोइराला,कुशुम खड्का,ओजस्वी केसी लगायतको अभिनय छ । यौवनको माद अनी वेहो...
काठमाडौं– ट्रन्डी फिल्मस्को व्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ‘धुम–२’ युट्युवमा सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्रलाई साईराम पिक्चस् प्रालिको युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । ‘धुम–२’मा अभिनेता जयकिशन बस्नेतको निर्माण, लेखन, नृत्य र निर्देशन रहेको छ । जसमा जाहन्वी बस्नेत र ब्रबिम बस्नेत प्रस्तुतकर्ता रहेका छन् । चलचित्रमा जयकिशन बस्नेत, सिर्जना भट्टराई, रोहित रुम्बा, महिमा सिलवाल, सञ्जोग राणा,...
बलिउड चर्चित गायक तथा संगीतकार हिमेशको कन्सर्टमा नेपाली युवा युवतीदेखि सेलिब्रेटीसम्मको घुईँचो (भिडियो)
काठमाडौँ- बलिउडका चर्चित गायक तथा संगीतकार हिमेश रेशमियाले शनिबार बेलुकी वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको ‘कर्मा बार’ मा आफ्नो प्रस्तुति दिएका छन्। रातको करिव ११ पुगेका हिमेश रेशमियाले उपस्थित २ सय बढी युवायुवतीलाई आफ्नो गीतमा नचाए। नेपाल र नेपालीलाई नमन गर्दै हिमेशाले झन्डै २ घण्टा दर्शक संगै झुमे। हिमेशको कन्सर्टमा सहभागी हुन अभिनेत्री सुष्मा कार्की, अनिता आचार्य लगायतका सेलिब्रेटी पुगेका थिए।
लक्ष्मी पूजाका लागी लक्षीत गर्दै सार्वजनिक गरियो ‘ओम जय जय लक्ष्मी माता’को भिडियो
काठमाडौँ – विभिन्न बिधामा गीत रचना गर्दै आएकी गीतकार अम्बिका गुरुङले आफ्नै शब्द शृजनामा भजनको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन् । हिन्दुहरुको महान पर्व तिहारको लक्ष्मी पूजाका लागी लक्षीत गर्दै गीतकार गुरुङले आफ्नो नयाँ गीत सार्वजनिक गरेको बताइन् । सार्वजनिक गीतमा मिना सिंहको आवाजमा रहेको उक्त गीतमा प्रकाश लेप्चाको संगीत भरेका छन् । समन अधिकारीको निर्देशनमा भनेको भिडियोलाई बिकाश धमलाको स...
Previous 1 … 561 562 563 … 640 Next